रङ्गशाला ३ अर्बको , घाटा १० अर्ब, रेणु दाहाल र धुर्मुस-सुन्तलि बिचको सबै सेटिङ्गको पर्दाफाश (हेर्नुहोस भिडियो) – Gorkhali Dainik
रङ्गशाला ३ अर्बको , घाटा १० अर्ब, रेणु दाहाल र धुर्मुस-सुन्तलि बिचको सबै सेटिङ्गको पर्दाफाश (हेर्नुहोस भिडियो)
April 9, 2021 466
यो पनि पढ्नुहोस: माओवादीले साथ छोड्दा पनि परेन केहि फरक, गण्डकीका मुख्यमन्त्री ‘सुरक्षित’
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका मन्त्रीद्धय हरिबहादुर चुमान र लेखबहादुर थापाले राजीनामा बुझाएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय पुगेर मन्त्रीद्धयले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।
चुमान आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री थिए भने थापा कृषिमन्त्री थिए। राजीनामा पत्र बुझाउँदै माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका चुमानले फेरि सहकार्यको बाटो खुलोस् भनेका थिए। मन्त्रीहरुले राजीनामा दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने यथावत नै राखेको छ।
माओवादी संसदीय दलले आज गरेको निर्णय अनपेक्षित थिएन। नेकपामा आएका विभाजनको असरले अन्य प्रदेशजस्तै यहाँ पनि छोएकै थियो। तर, माओवादीको निर्णयले यहाँका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई तत्काल चिन्तामा पारिहाल्दैन। माओवादीले मन्त्रीहरुलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन।
यद्यपि, यहाँको गणित केन्द्रको भन्दा फरक छ। माओवादीले समर्थन झिक्यो भने पनि सरकार ढलिहाल्ने अवस्था तत्काल देखिएको छैन। ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमाले एक्लैका २७ सांसद छन्। उसलाई एकल बहुमतका लागि ३ सिट मात्रै अपुग हो।
माओवादी केन्द्रसँग १२ सांसद (सभामुखसहित) छन्। वर्तमान सरकारलाई माओवादीसँगै जनमोर्चाले पनि समर्थन गर्दै आएको छ। जनमोर्चासँग ३ जना सांसद छन्। बहुमतका लागि ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ, जुन एमाले र जनमोर्चाका संसद जोड्दा पुग्छ।
Prevदुई मोटरसाइकल ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु
Nextपत्रकार महासंघको निर्वाचनः ६० जिल्लामा मतगणणा हुँदा काँग्रेस निकट विपुलको प्यानल नै अगाडी
भर्खरै आयो दु:खद खबर, सुरूङमा काम गरिरहेका मजदूरको माथिबाट झरेको ढुङ्गाले कि:चेर मृ:त्यु!
एउटै बाइकमा….५ जनालाई….बोकेर हेलमेट नै नलगाई तिब्र गतिमा कुदेका चालकलाई रोकेर प्रहरीले गरे सडक मै नमस्कार…!
वृद्ध भत्तागेर रंगशाला मा बनाउन लाज लाग्दैन भन्दै धुर्मुस सुन्तली माथि यसरी खनिइन् यि कलाकार